मोटरसाइकल र कारकाे वार्षिक कर बढ्यो , कुनमा कति पुग्यो ? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Auto News/मोटरसाइकल र कारकाे वार्षिक कर बढ्यो , कुनमा कति पुग्यो ?
२५१ देखि ४०० सिसीसम्मका मोटरसाइकलमा ८ हजार ८ सय रुपैयाँ कर रहेकोमा बढाएर ९ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ४ सय १ देखि ६ सय ५० सिसीसम्मका मोटरसाइकलमा १६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको वार्षिक कर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बढाएकाे छ।
त्यसैगरि ६ सय ५१ सिसी माथिका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको २५ हजार १ सय रुपैयाँ वार्षिक करमा ४ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाएर ३० हजार कायम गरिएको छ। उक्त व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०७७ मा उल्लेख छ।
१५ सय १ देखि २ हजार सिसीसम्मका कारमा २५ हजार ३ सय रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा साउन १ देखि २५ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। २००१ देखि २५०० सय सिसीसम्मका कारमा गत वर्ष ३५ हजार २ सय रुपैयाँ कर लागेकोमा चालु आवमा ३५ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भएको छ।
त्यसैगरी २५ सय १ देखि २९ सय सिसीसम्मका कारमा ४० हजार ७ सय वार्षिक कर लाग्ने गरेकोमा चालू आवमा ४१ हजार रुपैयाँ कर कायम गरिएको छ।२९ सय १ सिसीदेखि माथिका कारमा ५८ हजार ३ सय रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा चालु आवमा ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था बागमती प्रदेशले गरेको छ।